नेपाल खवर Coming Up Next » लक्की (गार्डेन राई)
International News 123456... › » भारतमा पानीको विवादमा ४० बस जलाइयो, २ राज्यमा तनाव	बेङलुरु, भदौ २८ ।
भारतको पश्चिमी दुई राज्य तमिलनाडु र कर्नाटकाबीच कावेरी नदीको पानी सम्बन्धि विवाद पुनः चुलिएपछि बेङलुरुमा ४० बसमाथि आगजनी भएको छ।	बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री क्यामरुनद्वारा सांसद पदबाट राजीनामा	लन्डन, भदौ २८ । बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन् ।	रुस र अमेरिकाको संयुक्त पहलमा सिरियामा युद्धविराम	काठमाडौं, भदौ २८ ।
सिरियामा रुस र अमेरिकाले संयुक्त रुपमा पहल गरेको युद्धबिराम सम्झौता लागू भएको छ ।	काश्मीर भिडन्तमा मारिनेको संख्या ७ पुग्यो	नयाँ दिल्ली भाद्र २७ ।
भारत प्रशासित जम्मु–काश्मिरमा सुरक्षाकर्मी र बिद्रोहीबिच भएको भिडन्तमा मारिनेको संख्या ७ पुगेको छ ।	बंगलादेशमा एक शक्तिशाली नेतालाई फाँसी दिइयो	काठमाडौं, भदौ १९ ।
बंगलादेशमा उद्योगपति तथा एक शक्तिशाली नेतालाई युद्ध अपराधको अभियोगमा फाँसी दिइएको छ ।	मदिरा सेवनबाट १८ जनाको मृत्यु, २५ सुरक्षाकर्मी निलम्बन,	पटना, भदौ ३ । भारतको बिहारमा गैरकानुनी रुपमा उत्पादित विषाक्त मदिरा सेवनबाट कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।	अमेरिकी कारवाहीमा २५० भन्दा बढी आइएस लडाकु मारिए	बग्दाद, असार १६ । इराकको फलुजा सहरमा अमेरिकी हवाई हमलामा २५० भन्दा बढी आइएस लडाकु मारिएका छन् ।	सोमालियाको होटलमा आक्रमण, १४ जनाको मृत्यु	असार १२ – इस्लामिक समूह अल–शबाबले सोमालियाको राजधानी मोगादिशुको एक होटलमा गरेको आक्रमणमा कम्तिमा १४ जनाको ज्यान गएको छ ।	बेलायतमा पुनः जनमतसंग्रहको माग गर्दै २५ लाखको हस्ताक्षर	असार १२ – बेलायत युरोपियन युनियन इयुको सदस्य कायमै रहने नरहने विषयमा फेरि जनमतसंग्रह हुनुपर्ने माग गर्दै २५ लाख मानिसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।	वेस्ट भर्जिनियाको बाढीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो	वासिङटन, १२ असार । अमेरिकाको वेस्ट भर्जिनियामा आएको बाढीमा परी ज्यान जानेको सङ्ख्या २३ पुगेको समाचार छ ।	Recent News
कालापत्थरबाट सगरमाथा हेर्दा लोभलाग्दो उचाई सोलुमा पौडिन थाले ट्राउट शिक्षक मृत फेला देवी उत्पत्ती गराएको विश्वासमा सयौंको भिड (फोटो फिचर) लेकको आलु र औलको खुर्सानी सन्तोष पन्तकी छोरी किन आक्रोशित ? फाटेको मन राष्ट्रनिर्माणमा युवाहरुको भूमिका जीवनबाट नहारौं, संघर्षबाट नहारौं, जीवन भनेकै संघर्ष हो । अनेरास्ववियू सोलुखुम्बुको १० औ जिल्ला अधिवेशन तयारी तिव्र कस्तो विकास ? कसरी विकास ? Solukhumbu News